Onyinye Enyemaka Ndị Mmadụ - Ihe Ndị Ruuru Mmadụ & Ihe Osise Site na PixelHELPER Foundation
enyemaka ndi mmadu
Ogige ndị ọrụ mmanye Bou Arfa Ihe ncheta Oké Mgbukpọ ahụ dị na Morocco
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 23. February 2019
N'ime ogige ọrụ mmanye dị na Morocco, ọtụtụ puku mmadụ nwụrụ na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Sahara. N'ihi ya, Morocco nwekwara akụkọ banyere Oké Mgbukpọ ahụ. Ha na-akpọ Bouarfa bụ Auschwitz nke ọzara
Akwụkwọ ozi ghere oghe nye King Mohammed 6 nke Morocco.
Ezigbo Nwa Ekele Mohammed VI, Art abụghị mpụ. Anyị German Organization maka Human Rights na n'ihi na nkwalite nke art na omenala chọrọ ngwa ngwa mkpesa gị banyere oké njọ ruuru na Morocco. Ihe a niile bidoro site na kichin ofe eji eji ekwu ofe nke Africa, nke ndị omenala jidere kemgbe Mee 2018 na Tangier, maka na anyị kwesiri ire ofe azụmaahịa na Marrakech. N'ihi na a afọ anyị na-ahụ ndị na-eri n'ime ahihia Mkpọ na anyị ofe usekwu gaara na-nyeere ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe afọ ojuju. Gini mere ndi isi gi ji akwatu ubi omenka anyi? N ’akwụkwọ ụlọ ahụ na Septemba 2018, ndị isi gị azaghị ya. Kwa ụbọchị anyị na-agbalị gafee niile ọwa nke mba site nzuko omeiwu banyere gị Moroccan embassies melite a kọntaktị gị ochichi ihe na-arụ ọrụ. Ọ dịghị mgbe ha zara ha. Na Disemba 2018 onye ọrụ mmepe anyị PixelHELPER Tombia Braide nwụrụ n'ihi omume ndị ọchịchị kpasuru ya iwe nke na ọ nwụrụ n'ihi nkụchi obi. N'ezie, e liri dị ka a ihe na-enweghị Ugbu na ụta e gbanwere na Moroccan Undertaker. Anyị rụrụ a sundial na ụtụ ya, nke a bụ ha bulldozers zerstört.Wir tinyere n'ime otu afọ 100.000 € na Morocco. Arụrụ achịcha a na-eme achịcha na-eme nri iji kwụsie ike na Afrịka ma nyekwa obodo anyị nri ụbọchị niile. Gendarmerie gị na - akpọrọ anyị ndị ọbịa bịara ebe ahụ ihe mere amachibidoro ịbịa leta anyị. Ajuju maka onye ọbịa anyi gha abia na ohia ahia na enweghi anagide Freemason. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọnụnọ nke onye ọbịa anyị. Ndị uwe ojii gwakwara ndị nta akụkọ ugboro ugboro na ihe ndị anyị nwere. Agbanyeghị na anyị nwere akwụkwọ niile dị mkpa iji nweta visas ndị ọchụnta ego na obodo gị, gụnyere afọ 3 na-enye ohere iji zụta, ndị uwe ojii chọrọ ịpị anyị. Anyị na-achọ ka akwụghachi nke mbibi na nwughari ebe achịcha na-eme achịcha. Shouldkwesịrị ịgwa ndị uwe ojii mpaghara gị na ndị omenkà abụghị ndị na-eyi ọha egwu. N'ihi na ọ bụ otu a ka esi emeso anyị. Anyị ọrụ bụ Mkadem, n'aka-ekpe Caid, n'ụzọ anụ ahụ na-egwu n'oghere anyị mpụga mgbidi bụghị na-emechi. Maka ememme shuga, ndị otu anyị ga-achọrịrị mkpụrụ raba maka oke nkịta. Na nwute, ngalaba ahụike ya mechiri na Ait Ourir na Marrakech. Anyị na-akpọ 100.000 euro maka nwughari na a onye na-arịọ mgbaghara si gị onyeisi ndị uwe ojii na Ait Ourir na Caid Ait Faska. Ọ dịghị mgbe ha na-agwa anyị okwu kama ha na-agwa naanị ndị na-anọ ya. N'ihi ime ihe ike ndị uwe ojii megide ndị ọbịa anyị, anyị chọrọ ndị ọrụ 100 nke nhọrọ anyị maka afọ 100 site na Ait Faska & Ait Ourir iji rụọ ọrụ na ọrụ nkà anyị.
Ndị ọrụ mmanye a na-echefuru echefu mara ụlọikwuu na Morocco. Ọtụtụ ndị Juu nwụrụ ebe a.
N'oge ọkọchị 1942 gara Dr. Wyss-Denant International Red Cross Mission (IRC) duuru ndị njem Boudnib, Bou Arfa na Berguent. Taa, ọ dịghị onye na-echeta anyanwụ n'ime obodo ndị a dịpụrụ adịpụ.
Ngosiputa nke ndi mmadu na egosiputa 2 site na steeti
Stebụ ojii na-etolite ncheta Oké Mgbukpọ n'otu akụkụ. Ndị ọbịa na-awagharị n'ihe ndị a
Ntinye uche ncheta ọnwụ kacha ukwuu na ụwa
Ngosiputa tupu mbibi ahụ. Mwube 1 afọ na 10 Moroccans.
Ọzọkwa akwa nke Walter Lübecke bibiri ma na-ese ihe. A gbajiri ọkọlọtọ EU na ala.
Kemgbe mbibi ncheta ọnwụ Holocaust anyị na-anụ n'akụkụ niile na ọ dịghị onye Juu nwụrụ na Morocco, a na-amanye ndị ọrụ ahụhụ maka ụzọ ụgbọ oloko & ihe ndị ọzọ mepere emepe. Na-arụ ọrụ ruo ọnwụ. Ibibi site na oru. Arụbeghị akụkụ a nke akụkọ ihe mere eme nke Moroccan, yabụ na steeti Morocco ga-ewulitekwa ncheta Oké Mgbukpọ ahụ iji gosipụta ozi a.
Ngụkọta nọ n'otu ụlọ nchekwa French 14 nwere ụdị dị iche iche na nwoke 4.000. Otu ụzọ n'ụzọ atọ bụ ndị Juu si mba dị iche iche. Ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ bụcha ndị nwoke, belụsọ na Sidi Al Ayachi, ebe enwere ụmụ nwanyị na ụmụaka. Campsfọdụ n'obere ụlọ mkpọrọ bụ ebe a na-eche nche, dịka ezigbo ụlọ mkpọrọ maka ndị na-emegide ọchịchị Vichy. A na-akpọ ndị ọzọ ogige ndị njem maka ndị gbara ọsọ ndụ. E debekwara ndị ọzọ maka ndị ọrụ si mba ọzọ. Ma ọ bụ ndị Juu nọ na Ogige Bou Arfa N'okpuru Vichy, Trans-Sahab Railway ghọrọ akara dị mkpa nke imekọ ihe ọnụ na nke Reich nke Atọ. Ya mere, enwere nnukwu mkpa maka aka ọrụ. Onye enweghị ike ịrụ ọrụ ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ.
Ọtụtụ puku ndị Spanish Republicans ghọrọ ndị nwere ibu ọrụ na ìgwè ndị ọrụ si mba ọzọ maka owuwu na idozi ụzọ ụgbọ oloko. Fleeingzọ ọrụ mgbe ọ gbasịrị mmeso ọjọọ Franco bụ nke obi ọjọọ na obi ọjọọ. A chụpụrụ ndị Juu si Central Europe na ndị Kọmunist Fransị ebe ahụ. Ndụ a na-adị kwa ụbọchị dị egwu. Ọtụtụ nwụrụ n'ihi mmekpa ahụ, mmekpa ahụ, ọrịa, agụụ ma ọ bụ akpịrị ịkpọ nkụ, akpị ịkpọ akpị ma ọ bụ agwọ.
Ndị na-ahụ maka ogige Berguent (Ain Beni Mathar) sitere na Ngalaba Mmepụta Mmepụta. Edebere ya naanị maka ndị Juu (155 na July 1942 na mgbe ahụ 400 na-amalite 1943 dị ka akụkọ CRI si kwuo). Jamaa Baida kwuru, "Mana nkasi obi ime mmụọ a ebelataghị eziokwu ahụ bụ na ogige Bergue bụ otu n'ime ihe kachasị njọ." A gwara Red Cross ka ọ mechie, ndị Juu bi na Berguedu, ọkachasị site na Central Europe, gbagara France ọsọ mbụ. Ndị otu ndị mba ọzọ nyere ndị ọrụ afọ ofufo a dara mba na-esote mmeri nke 1940 wee mebie ha maka "ebumnuche nchịkwa". Nke a bụ ihe mere Saul Albert, nwa amaala Turkey nke bịara 1922 na France. Ejidere ya na Bergua ruo mgbe a tọhapụrụ ya na March 1943. N'ime akwụkwọ ọgụgụ ya, o dere, sị:
"10. February (1941): Broke nkume ogologo ụbọchị. 2. Machị ...: Nyefee ndị nke ise na ndị Juu nke German. Enweghị m mmasị na nke ahụ ma ọlị. Ọrụ ahụ abụghị otu ihe; Anyị kwesịrị ịtụfu ... 6. Eprel: Anyị enweghị ike iguzozi ndu a. Enwere m ahụ ọkụ, mgbu mgbu ... 22. Septemba: Rosh Hashanah: Onweghi onye chọrọ ịrụ ọrụ ... 1. Ọktoba: anaghị eri ... "
Ndị nche, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị German, kpara arụrụala, ndị iro na ndị obi ọjọọ. "Ha gaara esonye na NS-SS ama ama." Prisonersfọdụ ndị mkpọrọ gbapụrụ, rute Casablanca ma sonye na ndị agha.
Na Boudnib, obere obodo nke nwere ndị 10.000, ogige ndị agha dị ugbu a bụ ndị akaebe ikpeazụ nke ogige ndị agha France. Ndị agadi bi na-edebe iberibe ncheta: "Enwere m ike ịgwa gị ihe abụọ doro anya. Nke mbụ bụ traktị Boudnib, nke ihe mejupụtara ya bụ ndị Juu. Nke abuo bu na a kuziri otutu ndi agha obodo n’ulo ulo akwukwo ulo akwukwo.
A kpọchiri Maurice Rue, onye nta akụkọ komunizim, ebe ahụ. Ọ gwara anyị na "nke ndị mkpọrọ 40, ụzọ n'ụzọ atọ bụ ndị Kọmunist, ndị na-elekọta mmadụ, na ndị Gaullists tupu ndị Juu 40 abịarute ọnwa ole na ole."
Mgbe ala America gachara na 8. November 1942 sonyeere Morocco n'akụkụ Allies. Na Jenụwarị 1943, ndị Allies zukọrọ na ogbako na Casablanca. Edebere nkwekọrịta agha na usoro agha. N'oge na-adịghị anya mgbe nke a gasịrị malitere na mwakpo nke Sicily (Operation Husky, July 1943) njedebe nke Europe nke Germany biri.
Akwụsịghị iwu ihe owuwu ahụ na Bou Arfa ma ọnọdụ agbanwebeghị nke ọma. A kwụrụ ha ụgwọ karịa ka ndị mkpọrọ Italiantali na ndị German nọchiri ndị Kọmunist na ndị Juu. Kaosinadị, owuwu nke Trans-Sahara ka bụ hel ụbọchị niile. Ọ bụ 1949 bụ onye France hapụrụ ọrụ ahụ, nke edoziri ka ọ bụrụ ihe ezighi ezi.
Ma ọ bụghị ya, agbatịpụrụ ndị na-ebu ibu n'etiti njedebe nke 1942 na mmalite nke 1943.
Ndekọ nke Bill Cran na Karin Davison dere, nke a na-akpọ Arte, ent
Ozi na-ezighi ezi na mgbasa ozi Moroccan
Anyi na-arịọ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi emetụtara ka ebipụta azịza & eziokwu. Ọdụ njem PixelHELPER na Morocco bụ imepụta ụzọ mmekọrịta dị iche iche nke enyemaka mmadụ na ịchịkwa ọrụ nka - ebe a n'ụlọ anyị - yana sọftụwia anyị ji eme ihe & nke anyị na-eji ụbọchị ndụ anyị gosipụtara na TED Talk na Marrakech. Na mgbakwunye na ugbo algae, achịcha achịcha na ịkwa akwa maka ọrụ ndị mmadụ, anyị wulitekwara ebe a na -ewupụta ogige site na oke mpụga EU, ncheta maka obere okpukpe niile na-eme mkpagbu na ihe okike nke ụlọ elu Orthanc. #HerrderRinge. Emere ihe omume ndị a n'ụzọ doro anya na usoro ndụ n'etiti Septemba 2018 na August 2019. Ekeere ọnụ na Onyenwe nke Mgbaaka Cosplay ma ọ bụ ịta uwe ogige. Na Septemba, anyị nyefere 2018 arịrịọ nnabata maka ubi anyị na nrụnye nka nke a na-edezighi edegharị n'ihi na onye isi obodo leghaara anyị afọ 1. Mgbe anyị chọpụtara na enweghi nkwukọrịta, anyị bidoro imejupụta ọrụ anyị. Akwụkwọ akụkọ na-ekwupụta ihe na-adịghị mma, dịka: Leak Water: can nweghị ike izu olulu mmiri nke onwe gị na enweghị njikọ na netwọ mmiri mmiri mpaghara. Kama nke ahụ, mgbe ụlọ obodo anyị niile mebiri ụlọ elu, mmiri anyị na-anọ n'èzí bụ ụbọchị niile maka ndị bi ebe ahụ. Stromklau: Anyị nwere ụgwọ ọkụ eletrik dị elu site na 200-300 € kwa ọnwa, enwetaghị ikike eletrik. Ego ego nke PixelHELPER n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ejiri ego na 15% kwa afọ site na onyinye na 85% site na mmemme ebe PixelHELPER ewepụtala atụmatụ dị iche iche na nzukọ ndị ọzọ. Nke a pụtara na ọbụlagodi na anyị rịọ maka onyinye na post ọfịs ọ bụla, isi mmalite nke ego bụ amụma dị mfe maka ndị ọzọ. PixelHELPER akpọbeghị onye Juu na-emegide ndị Juu ma ọ chọrọ ịmepụta ncheta ncheta nke ndị Juu ahụ Egbu ọchụ, Sinti & Roma, Uyghurs ... dị ka ebe ọha na eze iji kpokọta ozi ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme. E gosipụtara onye guzobere PixelHELPER na mgbasa ozi Moroccan dị ka nwoke idina nwoke, ma ọ nọwo na nwanyị hụrụ nwanyị Brazil mara mma n'anya ọtụtụ afọ. Anyị ejibeghị ụmụaka, mana anyị enyela ụmụaka dara ogbenye agbataobi ahụ uwe, ego, bọọlụ, okpu na ihe ịchọ mma ndị ọzọ, anyị nwekwara ihe mgbaru ọsọ maka egwuregwu bọl. Mkpesa na anyị chọrọ iji me Israel nke abụọ na Morocco, enweghị isi eziokwu ọ bụla. Obi abụọ nke Moroccans karịa Freemasonry abaghịkwa uru dịka e guzobere Lodge 1867 mbụ na Tangier. Onwere ebe obibi ndi nwanyi di ọcha na Morocco. Anyị onwe anyị ahụtụbeghị Masons Moroccan ma ọ bụ rụọ ọrụ ebe obibi. Ndi ochichi anyi nwere obi ojoo na ndi ochichi ala Morocco ndi huru ya kwa ubochi na ihe anyi na eme ebe a. Anyị kọwakwara ihe anyị na-eme na itinye n'ọrụ ya n'isi ụlọ ọrụ PixelHELPER livestream. Na ndị niile pụta apụtaghị ihe omume ndị a, amataghị nka, amaghị enyemaka ndụ ọhụụ ugbu a site na mgbasa ozi mmekọrịta ma na-atụ egwu enweghị isi mmalite abụghị ihe ọjọọ nke PixelHELPER kama ọ dabere na mmụta ha na isiokwu. Onye ọ bụla nwere ike ịnweta ozi. Dịka anyị hụrụ ka ọ na-ebi na ịntanetị kwa ụbọchị, ọ ga-abụrịrị ọrụ gọọmentị Morocco inwe mkparịta ụka anyị na anyị na-enye mgbe niile. Anabataghị kọntaktị niile. PixelHELPER dere mmadụ niile nke ndị omeiwu Morocc ugboro abụọ site na ozi-e. Ndị otu CORCAS niile natara ọtụtụ ozi ịntanetị. Asslọ ọrụ mgbasa ozi ndị Moroccan niile nọ n'ụwa na-enweta ozi n'aka anyị oge niile. A na-agwa onye ọrụ nke ụlọ ọrụ nnọchi anya Moroccan na Sweden banyere ọrụ ahụ. Akwụkwọ akụkọ a na-eme mkpesa banyere ihe osise cosplay nke ndị ọrụ anyị na-eyi uwe ejiji #herring na-egosi oke egwu. Anyị debere Merkel rhombus nke eji aka were kpuchie ya dị ka ihe nkiri cosplay na-atọ ọchị ma enweghị ezigbo Masonic. Na mbibi, obelisk anyị diri onye ahụ nwụrụ anwụ #TombiaBraide bibie, igwefoto igwefoto 15 mita anyị & - kpachara anya mebie maka ọtụtụ puku euro nke ike & eriri njikọ. Nkwupụta ndị a niile bụ ndị a pụrụ ikwu na ha. Onwe ya abughi nke PixelHELPER kama na nkwukọrịta nkwukọrịta nke ndị ọchịchị Morocco. Tupu ịmalite ọrụ ahụ na Morocco n'afọ 2014, Oliver Bienkowski jiri aka ya gwa ụlọ ọrụ nnọchi anya Moroccan dị na Berlin gbasara ọrụ niile ezubere.
Ncheta ncheta nke Holocaust mbụ na North Africa
Ihe ịrịba ama megide ndi nile achuputara n’iile n’ụwa niile. Ewuwu ncheta Okpokoro Ebube mbụ na North Africa bu n'uche ịbụ isi iyi nke banyere Oké Mgbukpọ ahụ maka ụlọ akwụkwọ na ọha mmadụ.
Ọ bụrụ na ngọngọ ọbụla na-ekwu ihe karịrị otu puku okwu. Ọrụ iwu ụlọ ncheta ncheta Holocaust mbụ na North Africa malitere na 17.07. Anyị guzobere ụzọ iji nye ndị ọbịa na labyrinth nke isi awọ egbochi mmetụta nke enweghị enyemaka na ụjọ nke ndị mmadụ nwere n'ogige ịta ahụhụ n'oge ahụ. Anyị chọrọ ịmepụta ebe na North Africa nke na-ebute ebe nchekwa na afọ dijitalụ. Site n’ịgagharị, ndị na-ekiri ihe na-anọ n’ebe a na-ewu ihe owuwu ma nwee ike iji onyinye gị nyere aka metụta ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na ihe mgbochi a ga-ewu. Ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekiri ma nye onyinye ka emee ncheta Oké Mgbukpọ ahụ na-aghọ.
Ẹdọhọ ke Editi emi ẹwotde ke Marrakech edi akakan ke ererimbot. Oge 5, ihe ncheta nke Oké Mgbukpọ ahụ Berlin ga-abụrịrị na okwute 10.000 gbara gburugburu ụlọ ọrụ ihe ọmụma na-akụziri ndị ọbịa banyere Oké Mgbukpọ ahụ.
Onye guzobere PixelHELPER Foundation, Oliver Bienkowski, na-achọ aha nna ya na nchekwa data nke Yad Vashem ma hụ ụfọdụ ntinye, mgbe ahụ ọ lere anya ebe ncheta Oké Mgbukpọ ahụ na-esote n'Africa ma chọta naanị otu na South Africa. Ebe ọ bụ na ọ dị ka ọkara njem ụwa site na Morocco, o kpebiri iwu ncheta Oké Mgbukpọ na saịtị PixelHELPER. Ngwongwo ndị agbata obi niile bụ n'efu, yabụ enwere ohere iji wuo opekempe 10.000 opekata mpe.
Ogige ndị ọrụ mmanye Bou Arfa Ihe ncheta Oké Mgbukpọ ahụ dị na Morocco October 10th, 2019Oliver Bienkowski